TGV- Toamasina : “Levonina ny hery…” | NewsMada
TGV- Toamasina : “Levonina ny hery…”
Hamerina ny tanjany teo aloha ny antokon’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Rajoelina Andry, raha ny filazan’ny mpitarika azy eo anivon’ny faritanin’ i Toamasina, ny depiote voafidy tao Mahanoro, Naharimamy Irmah, ny faran’ny herinandro teo, tamin’ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao.
Nambarany fa hamerina ny tanjany teo aloha ny antokon’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha ary efa anatin’ny fahavononana hiatrika fifidianana. “Levonintsika ny “hery” mampahantra vahoaka ary havondrona kosa ny angovo izay heverina ho mafy orina hampiraisana ny vahoaka malagasy”, hoy izy.
Nahavory mpikambana maro io hetsiky ny TGV teny an-tokotany malalaky ny lisea tsy miankina Stella Maris io. Saika tonga tao avokoa ireo mpikambana solontenan’ny distrika miisa18 mandrafitra ny faritanin’ i Toamasina: “Velombolo izahay misolo tena ny filoha mpanorina ny antoko TGV, raha mahita anareo tonga maro nahafeno ny tokotaniben’ity sekoly ity”, hoy depiote Naharimamy Irmah.